Bandhig cusub oo lagu jeesjeesay hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ka furmay dalka Talyaaniga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Bandhig cusub oo lagu jeesjeesay hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ka furmay dalka Talyaaniga
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Shiinaha • dhaqanka • Education • Entertainment • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Bandhig faneed cusub oo lagu maadsanayo hogaamiyaha Shiinaha oo ka furmay dalka Talyaaniga
Saraakiisha Shiinaha ayaa isku dayay in ay cadaadis saaraan magaalada si ay u baajiyo xaflada - laakiin qabanqaabiyeyaasha ayaa si walba u sii socday iyaga oo isku dayaya in ay 'taageeraan xorriyadda hadalka.'
Farshaxanistaha Shiinaha ee Badiucao ayaa bandhig cusub ku jeesjeesay dacaayadda shuuciga ee Beijing.
Bandhiga cusub wuxuu dhaleeceynayaa cadaadiska siyaasadeed ee Shiinaha iyo faafreebka Shiinaha ee asalka fayraska COVID-19.
Kahor bandhiga bandhiga, Shiinuhu wuxuu ku booriyay saraakiisha Talyaaniga inaysan ogolaanin bandhigga.
Matxaf ku yaal Brescia oo ku taal waqooyiga Talyaaniga Sabtidii hore, bandhig faneedka "Shiinuhu (ma dhowa)" oo uu sameeyay fanaankii ka soo horjeeday Shanghai, Badiucao, ayaa ka furay matxaf ku yaal Brescia ee waqooyiga Talyaaniga.
Waxaa durba la isla dhex marayey in bandhigan uu keeni karo fadeexad diblomaasiyadeed oo weyn.
Farshaxanistaha mucaaradka ayaa caan ku ah wax-qabadyo uu ku dhaleeceeyo heerka xuquuqul insaanka ee Shiinaha, bandhigganna maaha mid ka reeban.
Mid ka mid ah shuqullada farshaxanka, kaas oo muujinaya Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping Winnie the Pooh, ayaa durba ka careysiisay madaxda Shiinaha. Afar sano ka hor, dabeecadda Disney waxay ku ceebowday mas'uuliyiinta Shiinaha iyo shabakadaha bulshada ee Shiinaha ayaa bilaabay inay si degdeg ah u tirtiraan sawirada Disney's Winnie the Pooh, sababtoo ah wuxuu u eg yahay Xi Jinping.
Farshaxanku wuxuu kaloo ammaanay dhakhtarka Shiinaha ee Wuhan Li Wenliang, kaasoo ahaa qofkii ugu horreeyay ee ka warbixiya cudurka dillaacay ee coronavirus isagoo muujinayay bilayska oo eryanaya mudaaharaadayaasha. Iyo mid ka mid ah boodhadhka jeesjeeska ah ee Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka ee soo socda, farshaxanku wuxuu muujinayaa nin biathlete ah oo ku fiiqaya qoriga maxbuus Uyghur ah oo indho-xidhan.
Warqad rasmi ah oo loo diray Duqa Magaalada Brescia, Safaaradda Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha ee Rome waxay ku sheegtay in farshaxanku "ay ka buuxaan been-abuur ka dhan ah Shiinaha" iyo in "ay leexiyaan xaqiiqada, faafiyaan macluumaad been abuur ah, marin habaabiyaan Talyaaniga oo ay si dhab ah u xumeeyaan dareenka. ee dadka Shiinaha."
Si kastaba ha ahaatee, mas'uuliyiinta magaalada iyo maamulayaasha madxafka, si kastaba ha ahaatee, waxay horay ugu sii adkeeyeen qorshayaasha bandhigga.
"Waxay ahayd inaan akhriyo warqaddan laba jeer sababtoo ah way iga yaabisay," ayay tiri ku xigeenka duqa magaalada Brescia Laura Castelletti, iyada oo ku tilmaantay "xad-gudub" xorriyadda hal-abuurka. Codsiga ah in la joojiyo bandhigga, ayay raacisay, kaliya "waxa la helay dareen dheeraad ah."
"Sababtoo ah fankaygu wuxuu had iyo jeer diiradda saaraa arrimaha xuquuqul insaanka ee Shiinaha… waxay iga dhigaysaa ku dhawaad ​​nooca cadowga 1-aad," Badiucao ayaa u sheegay suxufiyiinta.
"Qof kasta oo isku dayay inuu sheego runta ama sheeko ka duwan sheekada dawladda Shiinaha waa la ciqaabi doonaa," Badiucao ayaa yidhi.
"Markaa waa sababta, aniga ahaan, runtii way adag tahay in runtii bandhig lagu sameeyo gallery la aasaasay, madxaf sidan oo kale ah," ayuu raaciyay.
Mid ka mid ah shaqooyinka ugu kicinta badan waa sawirka isku-dhafka ah ee Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo Hong Kong madaxa fulinta Carrie Lam - oo muujinaya hoos u dhaca xuquuqaha ee gumeysigii hore ee Ingiriiska.
Waxa kale oo jira sawirro taxane ah oo ka kooban 64 saacadood oo farshaxanku uu ku sameeyay dhiiggiisa. Shaqadu waxay tixraacaysaa saacadaha la siiyay askarta Shiinaha ee ka qayb qaatay xasuuqii Tiananmen Square ee 1989kii.
Bandhiga waxa kale oo ka mid ah qalabka jidh-dilka oo dib loo naqshadeeyey sidii kursi ruxaya. Maalmaha ugu horreeya ee bandhigga, Badiucao wuxuu ku fadhiisan doonaa kursiga jirdilka wuxuuna ka akhrin doonaa xusuus qor uu u soo diray qof deggan Wuhan. Shaqadu waxay faahfaahinaysaa 100 maalmood oo diiwaanno laga soo bilaabo marxaladihii hore ee cudurka faafa ee coronavirus.
Badiucao waxa uu caan noqday sanadkii 2011 ka dib markii uu sawir gacmeedyo ku dhejiyay Sina Weibo oo Shiinuhu u maareeyay shil tareen oo xawaare sare ku socday oo ka dhacay Wenzhou. Sawirada dhowr jeer ayaa faafreeb lagu sameeyay, inkastoo fannaanka uu hadda heysto dhalashada Australia, maamulka dalkaasi ayaa sii wada weerarada. 2018, bandhig shaqo oo la qorsheeyay oo ka dhacay Hong Kong ayaa la joojiyay "sababo amni". Qabanqaabiyayaasha ayaa go'aankan ku macneeyay "hanjabaado ka yimid mas'uuliyiinta Shiinaha", ka dibna farshaxanku wuxuu sheegay in xubnaha qoyskiisa ee Shiinaha loo hanjabay.